Mas’uuliyiinta MMJ Oo Kulan Layeeshay Shaqaalaha MMJ - Cakaara News
Mas’uuliyiinta MMJ Oo Kulan Layeeshay Shaqaalaha MMJ
Jigjiga(cakaaranews)Axad 1da January 2017. Kulan balaadhan oo uu soo agaasimay MMJ islamarkaana looqabtay shaqaalaha kaladuwan ee kahawlgala xafiisyada MMJ gaar ahaan xafiiska waxbarashada MMJ iyo Xafiiska Caafimaadka MMJ ayaa si habsamileh uga qabsoomay hoolka shirarka ee kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI.
Hadaba, Kulankan balaadhan Oo Uu Shir Gudoominayay Maayorka Maamulka Magaalada Jigjiga mudane Siciid Suleymaan Axmed ayaa sheegay in shirkan u jeedadiisu tahay Dardar Galinta Shaqada iyo sidii loo sii adkaynlahaa adeega bulshada lasiinayo islamarkaana uu adeegu u noqon lahaa mid bulshadu ku qanacsantahay. Wuxuuna maayorku intaa kudaray in shaqaalaha MMJ koox koox iyo xafiis xafiis ay ula yeelanayaan shirar kaladuwan kanina uu yahay mid ku qotoma sii xoojinta shaqooyinka MMJ gaar ahaan tayaynta waxbarashada iyo caafimaadka. Wuxuuna u soo jeediyay shaqaalaha in qofkasta shaqooyinka uu hayo lagula xisaabtami doono.
Dhinaca kale, waxaa isna shirkan ka hadlay Madaxa Arrimaha Xisbiga MMJ mudane Cabdulaahi Muxumed Faarax oo xusay in shirkan diirada lagu saarayo tayaynta adeegyada waxbarashada si magaalada jigjiga ay uga soo baxaan ardey waxbaratay oo tayo leh. Iyo waliba tayaynta adeega caafimaadka si loo helo bulsho caafimaad qabta oo ku dhiirata tagista xarumaha caafimaadka.
Ugudanbayna shirka ayaa kusoo dhamaaday jawi wanaagsan oo lagu kalaqaatay dadaal iyo kamidho dhalinta qorshayaasha u yaala MMJ.